Dab xooggan oo qabsadey dhisme 24 dabaq ah oo ku yaala Galbeedka London - Wargane News
Home Somali News Dab xooggan oo qabsadey dhisme 24 dabaq ah oo ku yaala Galbeedka...
Dab xooggan oo qabsadey dhisme 24 dabaq ah oo ku yaala Galbeedka London
Waxaa weli socda badbaadinta dadkii wax ku nqodey, dab aan horey loo arag isaga oo kale oo qabsadey dhisme aad u dheer oo gaaraya 24 dabaq galbeedka magaalada London ee dalka Ingriiska. Dabka ayaa kacay saqdii dhexe ee Arbacada saacaddu markey ahayd xiliga London 01:00am.
Booliska ayaa xaqiijiyey dhimashada 6 qof, waxaana ku dhaawacmey 50 qof oo kale. Waxaa la aaminsan yahay in ay jidaan dad kale oo meydadkoodu ku dhex jiraan dabka, Dadka goobjooga ahaa ayaa saxaafadda u sheegay waxa ay indhahooda kua rkeen, qaar ayaa sheegay in ay arkeen dad daaqadaha ka boodaya si ay dabka uga badbaadaan, halka qaar kale sheegeen caruur taagan daaqadda dabkuna aad ugu dhawaa.
Waxaa demninta dabka ka qaybqaatey 200 oo kamid ah shaqaalaha la dagaalama dabka, kuwaas oo isticmaalayey diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Lama yaqaan sababta dadbkaani ku kacay, waxaase si weyn loola yaabey sida weyn ee dabku ku faafey oo uwada qabadey dhismaha oo dhan.
Waxaa wel-wel xooggan laga qabaa in dhismaha dhan soo dumo, waxaana laga daad gureeyey dadkii ku dhawaa dhismaha.